“Waligey kuma fikirin in Messi uu ka tagi doono Barcelona” – Ronaldinho – Gool FM
Dajiye October 22, 2021
(Paris) 22 Okt 2021. Halyeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Ronaldinho, ayaa wuxuu daaha ka qaaday inuu la yaabay bixitaankii laacibka reer Argentina ee Lionel Messi oo ku biiray Paris Saint-Germain, intii lagu jiray suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
Ronaldinho ayaa sheegay intii u ku jiray wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Le Parisien” ee dalka France:
“Messi iyo Neymar waa saaxiibo, mar kasta oo aan fursad u helo inaan la joogo waan ka faa’iideystaa, sababtoo ah waa waqti aad u gaar ah.”
“Markii aan imid Barcelona, ​​waxaa durbaba laga hadlay Messi, intaas kaddibna waan la tababartay oo waxaan arkay kartidiisa”.
“Ciyaar walba iyo tababar walba wuxuu isagu ahaa mid gaar ah, waxayna ii ahayd farxad inaan daawado Messi oo sidaas samaynaya, wuxuuna noqday saaxiibkayga dhabta ah.”
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko Messi oo hadda ku sugan Paris Saint-Germain, oo aan ka bilaabay xirfadeyda Yurub, inkastoo aan fileynin inay taasi dhici doonto, waxaan u mooday in xirfadiisa ciyaareed uu ku soo gabagabeyn doono Barcelona.”
Xiddigii hore ee Barcelona iyo Paris Saint-Germain ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay:
“Aniga ahaan, bixitaanka Messi waxay ahayd wax la yaab leh, sababtoo ah waligey kuma fikirin inaan ku arki doono maaliyad aan ahayn Barcelona.”
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Arsenal iyo Aston Villa ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey